Ka takhalus kooxaha Tababbarka Chrome ee lagu qasbay Android | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Ka takhalus kooxaha Tababbarka Chrome ee lagu qasbay Android
Google Chrome waxa ay dhawaan cusboonaysiisay abka Android oo ay soo bandhigtay astaamo badan oo ay ku jiraan Google Lens dhexgalka iyo badhanka Raac ee mareegaha. Google waxa ay dhawaan ku dartay badhan lasocoda Chrome-kooda beta kaas oo kuu ogolaanaya inaad lasoco website-yada wixii ku cusub, tani waxay la shaqaysaa quudinta RSS-ka caadiga ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah warbixinnada shilalka kadib cusbooneysiinta ugu dambeysay. Marka ay la socoto shilalka isticmaalayaashu ma awoodaan inay joojiyaan kooxaha tab Chrome. Cusboonaysiinta ka dib, isticmaalayaashu waxay la kulmaayaan kooxaha Tababbarka Chrome ee Android.
Google Chrome ma curyaamiyo kooxaha Tab-caarada Chrome ka dib marka laga damiyo calamada Tani aad bay uga cadhaysiisay Chrome ahaan isticmaalayaasha Android ahaan. Marka, maqaalkan waxaan ku tusi doonaa sida aad u joojin karto kooxaha tab ee Google Chrome ee Android.
Talaabooyinka lagu tirtirayo kooxaha Tababbada Chrome ka ee Android:
Dib u dajin Calamada Chrome: Fur chrome://calannada oo dib u dabee dhammaan calamada Chrome-ka adiga oo taabsiinaya badhanka Dib-u-dejinta oo ku yaal geeska kore ee midig. Tani waxay dib u dajin doontaa dhammaan calamada Chrome-ka ee browserka.
Daar calanka M89Raadi calanka M89 oo awood u yeelo calanka. Waxaad riixi kartaa halkan si aad u furto calanka M89 ka dibna ka dooro Enable ka menu hoos u dhaca.
Dami calanka Kooxda TabKa raadi kooxaha Tab calamada chrome oo dami calankan. Calankan waxaad ka heli kartaa adigoo gujinaya halkan.
Dami calanka tab beddelahaRaadi calanka Tab switcher ama guji halkan si aad u gasho calankan. Hadda ka dooro Disabled liiska hoos-hoosaadka.
Deji Calan Layout Tab si loo hawlgeliyay iyada oo aan koox auto ah lahaynKa raadi calanka qaabka tab ee chrome://flags ama halkan guji si aad u furto calanka qaabaynta tab. Hadda liiska hoos-u-dhaca, waxaad u baahan tahay inaad dooratid "Enabled without auto group" si aad u joojiso kooxaha qasabka ah ee Chrome for Android.
Dib u bilow Browser-ka Chrome-kaKa dib markii aad dejisay dhammaan chrome: // flags dib u hawlgeliya browserka adiga oo ku dhejinaya badhanka Dib u soo celinta ee ku yaal geeska hoose ee midig.
U beddel qaab-dhismeedka Tab si aad u dartoKa dib marka dib loo bilaabo browserka fur chrome://flags oo ka beddel qaabka tab una beddelo liiska hoos-hoosaadka.
Dib u billow browserka markale si aad u joojiso kooxaha Tab ee Chrome for AndroidKa dib markii aad karti u siiso Layout Tab, kaliya dib u soo celi browserka mar labaad oo hadda waxaad si guul leh uga takhalustay kooxaha Tababbarka Chrome ee Android.
Ma u aragtay casharradan mid waxtar leh? La wadaag baraha bulshada si aad u faafiso. Su'aalahaaga ku weydii qaybta faallooyinka ee hoose. Waxaan uga jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Naga raac Twitter-ka si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo wararka ku saabsan Android. Thanks for reading.
Sida loo damiyo Turjumaada Chrome for Android
Soo hel Qaybta shilalka Chrome ee Android
Sida loo damiyo badhanka cod raadinta ee Chrome for Android
Instagram Reels ayaa imanaya boggooda
Tilmaamaha Galaxy Tab S8 Ultra iyo qiimaha ayaa soo daatay